Siciid Ducaale oo ka mid ahaa laacibiintii Soomaaliyeed oo lagu aasay magaalada Cadan - Jowhar Somali Leader
Home News Siciid Ducaale oo ka mid ahaa laacibiintii Soomaaliyeed oo lagu aasay magaalada...
Allaha u naxariistee waxaa magaalada Cadan ee dalka Yeman ku geeriyooday ciyaaryahankii caanka ahaa ee Soomaaliyeed Siciid Ducaale kadib markii uu muddo dheer xanuunsanaa waxaana lagu aasay maanta magaalada Cadan ee dalka Yemen.
Siciid Ducaale ayaa ka mid ahaa ciyaaryahanadii horaantii toddobaatameeyadii caanka ka ahayd dalka Soomaaliya isagoo u ciyaari jirey kooxda Horseed.
Allaha u naxariistee Siciiid Ducaale ayaa sidoo kale u soo wada ciyaaray xulalka Soomaaliya iyo Yemen.
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa ka tacsiyeeyay geerida allaha u naxariistee Siciid Ducaale.
Siciid Ducaale ayaa ku dhashay magaalada Cadan ee dalka Yemen sanadkii 1947dii.
Siciid Ducaale waxaa uu ahaa nin la tirsado laadadka xorta ah kolka loo dhigo sida badan, waxay ahaayeen goolal, wuxuu kaloo ahaa weeraryahan celcelis ah oo daran, horseed waxaa uu u qaaday horyaallo iyo koobab fara badan.
Kooxda Horseed waxaa kaloo ay soo qaadeen xilligii uu u ciyaarayey koobkii SECAFA ama xulalka bariga iyo bartamaha afrika, waxaa uu ahaa nin ay aad u dhibsan jireen kooxaha Abaluya iyo Gormahia ee dalka Kenya.
Ducaale waxaa kaloo uu hore ugu soo ciyaaray kooxda Zamaalik ee dalka Masar, in kastoo ay gaabnayd muddada uu u ciyaarayay, waxaa kaloo uu u soo ciyaaray kooxda al-wixda ee dalka Imaaraadka, ugu dambayntii wxaa uu ka mid noqday ciyaartoyda kooxda Al-Telaal ee dalka Yemen, taasoo uu u qaaday horyaallo iyo koobka koonfurta dalka Yemen, sidoo kale waxaa uu ka mid noqdey xulka Yementa koonfureed muddo fara badan kadibna wuu ka fariistay ciyaaraha.
Waxaa kale uu soo noqday tababare ama macallin maaddada xagga dhismaha jirka dugsi sare oo ku yaalla magaalada cadan,waxaa kaloo tababare u kooxda al-tellaal oo ka mid ah kooxaha ugu faca wayn dalka yemen ,waxaana la asaasay naadigaasi sannadkii 1905-kii.
lix carruur ah oo 24kii saac ee la soo dhaafay ugu geeriyootay Muqdisho roobab awgeed